- विश्वव्यापी समस्या बन्दै लागूऔषध दुर्व्यसनी: कसरी गर्न सकिन्छ न्यूनीकरण?
विश्वव्यापी समस्या बन्दै लागूऔषध दुर्व्यसनी: कसरी गर्न सकिन्छ न्यूनीकरण?
विश्वमा विकास सँगसँगै विनास र विकृतिहरू पनि भित्रिने गरेका छन् । विश्व एक तर्फ प्रगतिको लयमा अघि बढेको छ भने अर्को तर्फ विकृतिले समाज ओगट्दै आएको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा लागु औषधको दुरुपयोग विश्वब्यापी रुपमा समस्या बन्दै आएको छ । कलिला उमेरका बालबालिका देखि युवा हुँदै उमेर पुगेका पाका र अग्रजहरू समेत समाजमा हुने लागु पदार्थको शिकार हुने गरेका छन् । यसले विश्वव्यापीरुपमा समस्या र अपराधको पीडा दिएको छ ।
आज अन्तराष्ट्रिय लागुपदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्धको दिवस नेपालमा पनि सचेतना कार्यक्रम गरी मनाईएको छ । संयूक्त राष्ट्रसंघको सन् १९८७ को घोषणापत्रको ४२ को १ सय १२ खण्डमा उल्लेख भएअनुसार हरेक वर्ष जुन २६ का दिन अन्तराष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवस मनाउन थाालिएको हो ।
लागूऔषध सम्बन्धी तथ्याङ्क
एक अनुसन्धान अनुसार विश्वभरी २७ करोड मानिसहरू लागु औषधको ओसार पसार दुव्र्यसनका कारणले पीडित र प्रभावित भएका छन् । विश्वको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादकका १ प्रतिशत बजेट लागु औषधका कारोवार गर्ने व्यक्तिले खेलाई रहेको तथा कूल बजेटको ०.७ प्रतिशत बजेट लागु औषधका तस्करहरूले परिचालन गरिरहेको कुरा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वमा अहिले भईरहेको अपराधिक क्रियाकलाप मध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढि लागु औषध दुव्र्यसनीका कारण हुने गरेको तीतो यार्थाथ हाम्रो सामु, विद्यमान छ । विश्वमा हरेक वर्ष ३ सय २२ विलियन अमेरिकी डलर बराबर लागु औषधको खरिद विक्रि हुने गरेको र हरेक वर्ष १ करोड ज्यान यसैको कारणले जाने गरेको छ । विश्वका १७ करोड व्यक्तिहरू ड्रग्स दुव्र्यसनिमा फसिसकेका छन् ।
नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको अवस्था छैन । नेपालको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् २०७० को दशकमा हिप्पी को प्रवेशसँग नेपालमा लागु औषध सेवन गर्नेको संख्या बृद्धि भएको पाइन्छ । नेपालमा अहिले २ लाख भन्दा बढी नेपालीहरू लागु ओषधको कूलतमा फसेका छन् । ती मध्ये ८० प्रतिशत ७ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म पढ्ने किशोर किशोरी रहेका छन् । यसमा युवतीहरूको संख्या ४० हजार रहेको छ । चुरोट खैनी सुर्ती रक्सी गाँजा खानेबाट सुरु गर्दै डेनलाईट सुग्ने हुँदै लागु पदार्थ दुव्र्यसनमा फस्ने गरेको स्थितिमा विशेष गरी लागु औषधको गिरोहले ११, १२ कक्षाका युवतीहरूलाई प्रयोग गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीको दावी छ । नेपालका युवाहरू, बेरोजगार, अशान्ति, द्वन्द्वले गर्दा पनि लागु पदार्थको कूलतमा फसिरहेका छन् ।
कसरी फस्छन् दुर्ब्यसनमा ?
लागु औषधको लतमा धेरै जसो बालबालिका तथा युवाहरु पर्ने गरेका छन् । खराब साथीभाईको संगत, आमाबाबुले छोराछोरीलाई पर्याप्त समय दिन नसक्दा र कम वास्ता गर्दा युवा तथा बालबालिकाहरु दुर्ब्यसनमा पर्ने गरेका छन् । यस्तै लागु पदार्थ सजिलै उपलब्ध हुने हुँदा समेत यसको प्रयोगमा वृद्धि आएको छ । यस्तै लागु पदार्थको खराब असर बारे जानकारी नहुँदा समेत ब्युवा तथा बालबालिकाहरु लागुपदार्थको लतमा पर्ने गरेका छन् । यस्तै कोहिले मानसिक रोगबाट ग्रस्त हुँदा, मनोरञ्जनको साधनको रुपमा लिँदा तथा पारिवारिक बिखण्डन हुँदा समेत लागुपदार्थको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
कसरी गर्न सकिन्छ न्यूनीकरण ?
लागु औषधजस्ता गम्भीर समस्या समाधान गर्न अनुसन्धान छानविन, परीक्षण मुद्धा दायरसम्बन्धी विशेष ब्यवस्था गर्न आवश्यक छ । लागु औषध परीक्षण गर्ने, विशेषज्ञ तयार पार्ने, लागु औषधसम्बन्धी अपराध अनुसन्धान गर्न छुट्टै निकाय खोल्ने जस्ता उपायहरु अपनाएर लागुऔषध प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । सरकारका तर्फबाट रोजगारीका कार्यक्रम, बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई यथेष्ट समय, समाजमा युवामैत्री वातावरण, उनीहरुलाई समाजिक कार्यमा संलग्न गराउने, टोलटोलमा कला संस्कृति, नृत्य, संगीत, खेलकुद आदिसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ । यसरी उनीहरुका रुचीअनुसारका रचनात्मक कार्यक्रम समाज र राज्यले ध्यान दिन सके उनीहरुलाई लागूऔषधको लतमा पर्न बाट बचाउन सकिन्छ । अहिले किशोरकिशोरीहरु लागू औषधको लतमा फस्ने गरेको पाईएको छ । माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयतहका किशोरकिशोरीहरु लागू औषधको कुलतमा फस्ने गरेको पाईएको हुँदा उनीहरुको पाठ्यक्रममै लागूऔषध प्रयोगको नकारात्मक असरहरुलाई समावेश गर्न जरुरी छ । लागु औषध रोक्न र नियन्त्रण गर्न बनेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई संवेदनशील ढङ्गबाट कार्यन्वयन गर्न वा कडाइका साथ लागु गर्न नसके लागुपदार्थ र दुव्र्यसनीले ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने तर्फ समयमा नै सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।